» Daraasad ku saabsan kaniiniga Viagraha
Dood wadaag3/28/2011Asc dhammaanWaad ku mahadsan tihiin sida fiican ee aad uga hadasheen kiniinkan VIAGRA. Waxaadse ka tagteen qayb muhiim ah oo ku saabsan kiniinkan. Kiniinkani markiisii hore ee la baadhayey waxaa loo raadinayey in lagu daweeyo cudurrada wadnaha.Ka dib markii lagu tijaabiyey rag da' ahaa oo qabay wadno xanuun ayaa si lama filaan ah waxaa la arkay odayaashii oo xubintooda taranku kacdey. Halkaas ayaana lagu ogaadey faaiidada kale ee uu leeyahay kiniinkani. Markaas ayaa lagu sii sameeyey baadhitaan kale, lana ogaadey in loo isticmaali karo cudurka ciniinka ee ku dhaca ragga. Sildenefil ama Viagra looma isticmaalo oo keliya ciniinimada ee wadnahana waa loo isticmaalaa. Mana aha ragga oo keliya ee dumarkana waa la siiyaa marka laga daweynayo cudurrada wadnaha. Haddaba meesha aad leedihiin dumarku ma qaadan karaan waad ku khaldan tihiin. Waxayse dumarku u qaadan karin cudurka ciniinimada laakiin xanuunnada wadnaha waa loo siiyaa. Waxaanan aqaannaa qof dumar Somali ah oo qabta wadna xanuun oo la siiyo kiniinkan. Waanan hubaa ee wax la ii sheegey ma aha.ReplyDeleteAnonymous8/04/2015mahadsanidReplyDeleteAdd commentLoad more...